Cuba enwere ike ịzọpụta Italytali na ụwa site na Coronavirus?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Cuba enwere ike ịzọpụta Italytali na ụwa site na Coronavirus?
Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa Cuba • Editorial • Akwụkwọ akụkọ Italy • Akụkọ gbasara Jamaica • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche • Akụkọ na -agbasa na Venezuela
Ọ bụ ezie na nyocha nke mbụ maka ọgwụ mgbochi Coronavirus malitere na United States taa, Cuba nwere ike ịmaliteworị ọgwụ na-aga nke ọma nwere ike ịgwọ COVID-19. Ọdịda anyanwụ ụwa adịla nwayọ ịmata ikike obere mba Caribbean a na-enye aka na nnukwu nsogbu chere ụwa ihu n'ime ogologo oge.
Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ ebube Cuba nwere anọ na-arụsi ọrụ ike mana ọ bụghị ajọ ọrịa nke Coronavirus. Onwebeghị onye nwụrụ na Cuba site na ọrịa COVID-19. Ndị ọrịa nọ na Cuba gụnyere ndị njem nleta atọ nke Italiantali na otu onye mba Cuban na ọtụtụ ndị ọzọ kewapụrụ iche maka ịkpachara anya na-enyo enyo ma ikpe a na-ekwenyeghi n'okpuru mkpuchi.
Obodo Caribbean bụ otu n'ime ndị ikpeazụ na America na Caribbean na-ekwupụta na ọnụnọ nke ọrịa na ókèala ya.
Ndị dibia Cuban nọ n’ihu, ruo n’ókè nke gọọmentị ha na mba ụwa nile na-eziga ha mgbe ọ bụla iji meghachi omume na mberede ahụike. Iji maa atụ, ka anyị chee echiche banyere ihe mberede Ebola Ebola na mpaghara ọdịda anyanwụ Afrịka na 2013.
Ministrylọ Ọrụ Ahụike nke Cuban na-eme atụmatụ na site na 1960 ruo taa, ndị dọkịta ya nọ na-arụ ọrụ ruru ọrụ 600,000 na mba 164. Ọtụtụ n’ime ha ka na-arụ ọrụ na mba iri isii na asaa, tụmadị mba Africa na Latin America.
Redio Havana Cuba bụ ụlọ ọrụ gọọmentị na-agbasa ozi n'ikuku na mba Cuba. Enwere ike ịnụ ya n'ọtụtụ akụkụ ụwa gụnyere United States. Stationlọ ọrụ ahụ kwuru na ọgwụ ndị emepụtarala na Cuba nwere ike ịgwọ nje ahụ. E bipụtakwara akụkọ a na Morning Star News na UK, China, na Cuba News.
Taa, ndị nnọchi anya Cuban na Rome, ,tali, gosipụtara onyinye sitere n'aka Italiantù Enyi na Italiantali-Cuba (ANAIC) na Onye Nchịkọba Mba nke Ndị Cuban na (tali (CONACI) nke zigara ndị ọchịchị callstali iche iche iji nyochaa ohere nke ịrịọ onyinye sitere na Cuba, ya na ndị ọrụ ahụike na Cuban antiviral interferon Alfa 2 B, nke ejirila nke ọma megide # COVID19 na China.
Dabere na akụkọ si China, Alfa 2B nyere aka nke ukwuu ịkwụsị mgbasa nke nje ahụ na opekempe.
Giulio Gallera, Onye ndụmọdụ maka ahụike na ọdịmma nke mpaghara Lombardy na ,tali, kwupụtara n'ihu ọha, na Satọdee, Machị 14, 2020, na ya rịọrọ enyemaka ahụike na Cuba. Consul Consuban zaghachiri na-ekwu, sị: Ọ bụ ọrụ m ịkwado na anyị natara akwụkwọ ozi n'aka Maazị Gallera, bụ onye mepụtara arịrịọ ka ndị ọrụ Cuba bụrụ ọkachamara na njikwa nke ọrịa na-efe efe. Ndị nnọchi anya ndị Cuba na-ebuga akwụkwọ ozi a na Italy maka ndị ikike Cuban tozuru etozu, ndị anyị na ha na-emekọrịta ihe maka ebumnuche ndị a. ”
Industrylọ ọrụ na-ahụ maka ọgwụ ndị Cuban dị njikere ịgwọ ọtụtụ puku ndị nwere ike ịgwọ ọrịa COVID-19 n'àgwàetiti ahụ, ka Eduardo Martínez, bụ onye isi ala nke BioCubaFarma Business Group si kwuo.
Martínez kọwara na Fraịde a na nnọkọ ogbako na ọgwụ 22 emepụtara na Cuba bụ akụkụ nke usoro iwu enyere na agwaetiti ahụ iji merie ntiwapụ coronavirus, nke ọ sịrị, "Anyị nwere maka ọgwụgwọ nke ọtụtụ puku mmadụ, anyị nọkwa na-akwadebe ime ka mmepụta nke ndị nwere obere mkpuchi dịkwuo elu. ”
Na Caribbean, Jamaica, St. Kitts na Nevis, na St. Vincent na Grenadines kwupụtara na ha ga-arịọ ma ọ bụ rịọrịrị enyemaka ahụike n'aka ndị ogbo Cuba.
Ngalaba mbụ nke ndị ọkachamara nọọsụ 21 sitere na Cuba ga-abata na Jamaica na Machị 24 iji bulie ikike nke usoro ahụ ike iji mesoo coronavirus (COVID-19).
"Anyị na-anwa ịnweta ihe dị ka ndị nọọsụ ọkachamara 100 ọzọ na sistemụ ahụ, na-elekwasị anya na ngalaba ndị siri ike ma ọ bụ ICU (ngalaba kpụ ọkụ n'ọnụ)," gwara Minista Ahụike na Ahụ Ike, Dr. Christopher Tufton na St. Lucia News.
Onye ozi ahụ, onye na-agwa ndị nta akụkọ okwu na March 13 na Office nke Prime Minister, kwuru na mmepe ahụ na-eso mkparịta ụka na gọọmentị Cuba.
Terrance Drew, onye ọkachamara ahụike sitere na mmegide St. Kitts na Nevis Labour Party (SKNLP), kwuru na ha chọrọ ịrịọ ndị ọchịchị Cuban maka "enyemaka n'ịmepụta akụrụngwa na atụmatụ ịgwọ ndị butere ọrịa ahụ."
eTurboNews rute na aka Hon. Mịnịsta njem na Jamaica, Edmund Bartlett, maka ntinye ya, mana onwebeghị nzaghachi ọ bụla. Bartlett bụkwa isi nke Resilience zuru ụwa ọnụ na Center Management Crisis (GTRCM) dabere na Jamaica.
Ka ọ dịgodị, nkụda mmụọ rutere n'Italytali:
Ọzọkwa, ịdị n'otu na onyinye dị ukwuu si na mba ndi mmadu. Ma nke a mgbe European Union na-ahazigharị kpamkpam na ọnọdụ mberede a (ruo n'ókè nke enweghị usoro iwu n'okwu a) ma na-eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọdịmma mba anyị. Istali na-anata ego pere mpe ma e jiri ya tụnyere Spain, Poland, na Hungary, n'agbanyeghị mba ahụ nke nje a kacha emetụta taa.
Industrylọ ọrụ na-ahụ maka ọgwụ ndị Cuban kwere nkwa na Satọdee mepụta ọgwụ iri abụọ na abụọ eji agwọ ọgwụgwọ COVID-22 coronavirus, ọkachasị Interferon Alpha 19B, nke gosipụtara na ọ dị oke mma n'ịlụso ọrịa ahụ ọgụ.
Ọgwụ ndị Cuba nwere ike ịgwọ ọtụtụ puku ndị ọrịa coronavirus.
Onye isi otu BioCubaFarma bụ Eduardo Martinez kọwara na agwaetiti Republic ewepụtala ọgwụ iri abụọ na abụọ a ga-eji wee gbochie ya.
Ruo ugbu a, amata na otu n'ime ọgwụ ndị Cuba mepụtara, Interferon B, jisiri ike gwọọ ihe karịrị ndị ọrịa 1,500 nke coronavirus na ọ bụ otu n'ime ọgwụ 30 ndị Nationaltù Na-ahụ Maka Ahụ Ike China họpụtara iji lụsoo ọrịa iku ume ọgụ.
Ebu ụzọ mepụta ya na 1986 site na otu ndị nyocha sitere na Center for Genetic Engineering and Biotechnology (CIGB) wee webata ya na sistemụ ahụike Cuba.
Maazị Martinez kọwara Interferon B dị ka "ngwaahịa flagship nke setịpụrụ ọgwụ ndị Cuban" site na ọgwụ a mepụtara na Cuba na China na njikọta ọnụ dịka akụkụ nke nkwekọrịta dị n'etiti mba ndị na-elekọta mmadụ.
O kwuru na a pụkwara ibubata ọgwụ a na mba ndị ọzọ iji nyere aka gbochie mgbasa nke nje a ma gwọọ ndị na-egosi ihe mgbaàmà.
Onye isi ụlọ ọrụ CIGB bụ Eulogio Pimentel kwuru na ha nwere ngwongwo zuru oke nke “ga-aha nhata ịgwọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrịa niile ahụ mere na China” ebe ihe karịrị mmadụ 80,000 butere ọrịa a.
Cuba ezigala otu ndị dọkịta na ngwa ahịa nke Interferon B na Itali ebe ọ na-arụ ọrụ n'akụkụ ndị ọkachamara China iji nyere aka ịlụ ọgụ na ibute ọrịa coronavirus COVID-19.
Recombinant Human Interferon Alpha 2B, nke emepụtara na Cuba, yana otu ọgwụ ọgwụ ọzọ, bụ akụkụ nke usoro iwu iji lekọta ndị ọrịa nwere ọrịa a na nsogbu ọ bụla nwere ike ibilite.
Martinez Diaz mesiri ya obi ike na forlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Mkpụrụ ndụ Ihe Nchịkwa na Nkà Ihe Ọmụma (CIGB) nwere “ikike niile iji bute nje a na sistemụ ahụ ike mba.”
Cuba nọ na-eweta ọgwụ, nke emepụtara na teknụzụ Cuban na Changchun Heber Nkà na ụzụ ndu nkwonkwo nkwonkwo, nke di na Jilin, China.
A na-eji ya ugbu a na ndị ọrụ na-adịghị ike na ndị ọrụ ahụike dị ka mgbochi, yana ndị ọrịa nwere COVID-19 n'ụdị nebulization, ebe ọ bụ ụzọ dị ngwa iji ruo ngụgụ ma mee ihe na mbido nke ọrịa , ka ndị isi mere ka ọ pụta ìhè.
N'ihe metụtara ọgwụ ọgwụgwọ a, osote onye isi nke CIGB Marta Ayala Avila kọwara na interferons bụ mkpụrụ ndụ nke ahụ n'onwe ya na-emepụta na mmeghachi omume nke mwakpo nje, na-eme ka ha bụrụ nzaghachi mbụ nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ọgụ.
Na ntiwapụ nke coronavirus gara aga, SARS na 2002 na MERS na 2012, a na-ejikwa interferons maka nlekọta na ọgwụgwọ nke ndị butere ọrịa ahụ.
Nnyocha ndị e bipụtara mgbe e mesịrị gosipụtara na nje ndị a, kama ịmalite ịmepụta interferon n'ime ahụ, belata mmepụta nke mkpụrụ ndụ ndị a, ya mere ịdị irè nke ọgwụ na ịgwọ COVID-19.
Director General Eulogio Pimentel Vazquez gwara ndị mgbasa ozi na ha nwere ngwakọ ngwaahịa a nke ga-aha nha ego ole achọrọ iji gwọọ ndị niile butere ọrịa ahụ na China,
Ozi anakọtara site n'ọtụtụ Cuban, Chinese, Jamaican, Italian, na isi mmalite Britain na ọ bụghị ihe niile akpọrọ na akụkọ a ka enwere ike kwenye na eTurboNews.